Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Dirree Deetaa beezii
Fuulli kun kan mul'atu yoo galmeen deetaa beezii wajjin walidhate qofaa dha. Deetaa beeziirratti olkaa'amuu qabaachuu fi dhiisuu gatiiwwan wabii ifteessa.
Iddoo gatiiwwan wabii itti olkaa'aman agarsiisa. Deetaa beezii keessatti, gatiin wabii haalojii ammee saanduqa gurmuu bakka bu'uu ni danda'a.
Unka saxaxa keessatti Sanduuqa Garee Sajoo kamshaa irratti hantuuttee fayyadami goodayyaa fuula 4 masaka irratti uumuf cuqaasteen booda walindhaan kuusaa deetaa jiraachuu qaba
Fuulli kun kan mul'atu yoo galmeen deetaa beezii wajjin walqabate qofaadha.
Gaticha dirree deetaa beezii keessa olkaa'uu barbaaddaa?
Eeyyee, Dirree deetaa beezii armaan gadii keessattin olkaa'uu barbaada:
Lakki, gaticha unka keessa olkaa'uu qofaan barbaada.
Title is: Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Dirree Deetaa beezii